Medical mapoka - Study Medicine / Mbbs muUkraine. Low muripo mari yechikoro
Dentistry kana Stomatology
Course Duration 5 makore, panguva nyika kirasi University
dhigirii paakavapa: Dental nyanzvi
PG Pharmacy (D Pharmacy dhigirii): 2 makore
ndangariro: USMLE, dumbu, WHO, US, mci, PMDC, All African Medical Councils
* Invitation tsamba mari
* Courier Service mhosva
Health Insurance mari
700$US pa dzingaparwe gore
Rubvumo uye Registration muripo
Mazai pakati Ukrainian Munopinda Center
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 4700$US pagore.
Hunokosha Notice: Africa kuchengetera kodzero kuchinja muripo muripo pasina ziviso kuti ngirozi makambani. Isu pamwe chete State Wakaroorwa, National uye Worldwide recodnized Medical mumayunivhesiti rweUkraine. Above zvachose pasuru ndechokuti vakaziva yokurapa yunivhesiti pamwe yakachipa muripo uye zvakasiyanasiyana mari. Total pasuru zvimwe mumayunivhesiti yokurapa zvingava yepamusoro. Bvunzai Dentistry
dhigirii paakavapa: Doctor of Medicine
Course Duration 6 makore, panguva nyika kirasi University chepamusoro nhamba 1 kuEastern Europe, kwete chete muUkraine.
PG Medicine: 2 kuti 3 makore
ndangariro: USMLE, dumbu, WHO, US, mci, PMDC, All African Medical Councils. Muripo muripo kuputsa nokuda 1st gore.
Muripo muripo chete Accommodation kubva 2nd gore rokupedzisira gore 4200$US pagore.
Hunokosha Notice: Africa kuchengetera kodzero kuchinja muripo muripo pasina ziviso kuti ngirozi makambani. Isu pamwe chete State Wakaroorwa, National uye Worldwide recodnized Medical mumayunivhesiti rweUkraine. Above zvachose pasuru ndechokuti vakaziva yokurapa yunivhesiti pamwe yakachipa muripo uye zvakasiyanasiyana mari. Total pasuru zvimwe mumayunivhesiti yokurapa zvingava yepamusoro.
Bvunzai General Medicine
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 4200$US pagore.
Hunokosha Notice: Africa kuchengetera kodzero kuchinja muripo muripo pasina ziviso kuti ngirozi makambani. Isu pamwe chete State Wakaroorwa, National uye Worldwide recodnized Medical mumayunivhesiti rweUkraine. Above zvachose pasuru ndechokuti vakaziva yokurapa yunivhesiti pamwe yakachipa muripo uye zvakasiyanasiyana mari. Total pasuru zvimwe mumayunivhesiti yokurapa zvingava yepamusoro. Anoshanda Pharmacy
ukoti - IN (#BSC BSN , dNA ,MSN)
Shamwaridzanai Degree vari Nursing (dNA) Junior nyanzvi: 2 makore
Bachelor of Science muna Nursing (BSC -BSN): 3 makore
Vadzidzi vanenge kare akawana (dNA) kubva upi yunivhesiti munyika, anogona kuwana BSN chete 2 makore
Medium kurairirwa : IN Chirungu MUTAURO
UKRAINE CHIPATARA Africa IN Chirungu
kuzivikanwa BY : USMLE, dumbu, WHO, US, mci, PMDC,UNESCO ,UNICEF , muIndiya ,All African Medical Councils
Muripo muripo kuputsa nokuda 1st gore ONLY .
600$US pa dzingaparwe gore
Muripo muripo chete Accommodation kubva 2nd gore rokupedzisira gore 4300$US pagore.
Masters dhigiri Duration: 2 makore
Muripo muripo kubva 2nd gore rokupedzisira gore 2900$US pagore.
Hunokosha Notice: Africa kuchengetera kodzero kuchinja muripo muripo pasina ziviso kuti ngirozi makambani. Isu pamwe chete State Wakaroorwa, National uye Worldwide recodnized Medical mumayunivhesiti rweUkraine. Above zvachose pasuru ndechokuti vakaziva yokurapa yunivhesiti pamwe yakachipa muripo uye zvakasiyanasiyana mari. Total pasuru zvimwe mumayunivhesiti yokurapa zvingava yepamusoro. Bvunzai anorapa achishandisa mitemo Engineering
Bachelor Degree Duration:4 makore
500$US pa dzingaparwe gore
Muripo muripo chete Accommodation kubva 2nd gore rokupedzisira gore 2300$US pagore.
Bvunzai Veterinary Medicine